“Ku guuleysiga tartamo waxay caadi iiga noqotay Real Madrid” – Xiddig Los Blancos ah – Gool FM
(London) 12 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa waxay caado u noqotay in xilli ciyaareed kasta looga fadhiyo inay ku guuleysato koobab, maadaama ay tahay koox u sameysan inay guuleysato.
Xiddiga qadka dhexe reer Germany iyo kooxda Real Madrid ee Toni Kroos ayaa sheegay in ku guuleysiga koobab ay kooxdiisu noqotay arrin ​​qabatin ah, wuxuuna carrabka ku adkeeyay in markasta uu doonayo inuu la guuleysto kooxda.
Wargeyka “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Toni Kroos waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Tartamada aad ku guuleysato, iyo inaad guul gaarto kulamada, waxay kuu noqoneysaa balwad, sababatoo ah waxaad dooneysaa inaad si wado ku guuleysiga kulamo iyo tartamo badan”.
“Tani waxay kaa dhigeysaa inaad dadaal badan geliso tababarka si aad ugu guuleysan karto koobab badan, aasina waa waxa aan u ciyaarayo”.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay waxa aan ku guuleysatay, laakiin waxaan doonayaa in aan markale guuleysto”.
Si kastaba ha noqotee Toni Kroos ayaa kula guuleystay Real Madrid, horyaalka La Liga oo hal jeer ah, tartanka UEFA Champions League saddex jeer ah iyo hal jeer kale oo kooxdiisii hore Bayern Munich ah, sidoo kale wuxuu ku guuleystay labo Copa del Rey ah iyo saddex koob oo horyaalka Bundesliga uu la qaaday Bayern, seddex koob oo DFB-Pokal iyo labo koob oo DFL-Supercup ah.
Wuxuu sidoo kale ku guuleystay shan koob oo Koob kooxaha Adduunka ah, oo uu ka mid yahay hal jeer uu la qaaday Bayern Munich, halka inta kale uu kula guuleytay Real Madrid, UEFA Super Cup afar jeer, hal mar waa Bayern, inkalena Real Madrid ayuu la qaaday, laakiin ku guuleysiga koobka addduunka ee uu la qaaday xulkiisa qaranka Germany 2014 ayaa ah guulaha ugu caansan uu gaaray Toni Kroos.
Paul Merson oo kula taliyay Mikel Arteta in uu soo qaato xiddig hore ee kooxda Chelsea ah